टिकटकलाई किन गरियो अमेरिकामा जरिवाना ? | गृहपृष्ठ
Home अन्तरराष्ट्रिय टिकटकलाई किन गरियो अमेरिकामा जरिवाना ?
on: February 28, 2019 अन्तरराष्ट्रिय
टिकटकलाई किन गरियो अमेरिकामा जरिवाना ?
फागुन १६, वाशिंगटन डीसी (अमेरिका) । चिनियाँ भिडियो शेयरिङ एप टिकटकलाई अमेरिकाले ठूलो रकम जरिवाना तिराएको छ । बालबालिकाहरुको तथ्यांक गोपनीयता उल्लंघन सम्बन्धी एक मुद्दामा त्यहाँका नियामकले एपलाई ५७ लाख डलर जरिवाना तिराएको हो । टिकटकमा गाभिएको अर्को एपले जानी जानी कम उमेरका प्रयोगकर्ताहरुले एपमा पोष्ट गरेको सामग्री सार्वजनिक गरेको फेडरल ट्रेड कमिशन (एफटीसी)ले बताएको छ ।
ती सामग्रीलाई एपबाट हटाउन एफटीसीले टिकटकलाई आदेश दिएको छ । यो जरिवाना तिर्न कम्पनीले सहमति पनि जनाइसकेको छ । अमेरिकामा १३ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरुलाई एप चलाउन नदिन एप खोल्दा प्रयोगकर्ताको उमेर पुष्टि गर्नुपर्ने प्रावधान पनि एपले राखेको छ । फेसबूक लगायत कयौं सामाजिक सञ्जालहरुमा पनि युजर आइडी बनाउँदा उमेर पुष्टि गर्नुपर्छ ।
तर यी एपहरुमा प्रयोगकर्ताले जन्ममिति बढाइचढाइ गरेर सजिलै आइडी बनाउन सक्छन् । यस व्यवस्थाले अमेरिका बाहिरका अन्य विद्यमान प्रयोगकर्ताहरु भने प्रभावित नहुने टिकटकले बताएको छ । गत वर्ष टिकटक विश्वभर सबैभन्दा धेरै डाउनलोड हुने एप बनेको थियो । अहिले यसको प्रयोगकर्ता संख्या करीब १ अर्ब छन् । तर यसमा बालबालिकाहरुको संख्या पनि धेरै छ ।
टिकटकको मातृ कम्पनी बाइट डान्सले सन् २०१७ मा म्युजिकल डट ली नामक एप किनेको थियो । सो एपलाई कम्पनीले पछि टिकटकमै गाभेको थियो । यी एपहरुमा प्रयोगकर्ताले पृष्ठभूमिमा बजिरहेको गित वा डाइलगमा छोटो भिडियो बनाएर अन्य प्रयोगकर्तालाई पठाउन मिल्छ । पछिल्लो समय नेपालीहरुमाझ पनि यो टिकटक निकै लोकप्रिय बनेको छ । एजेन्सी